Liverpool iyo Arsenal oo Breejo Ku Kala Baxay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Liverpool ayaa garoonkeeda Anfield barbardhac 2-2 ah kula gashay kooxda Arsenal.
Kooxda Liverpool ayaa goolka la hor martay,waxaana dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Philippe Coutinho.
Ciyaaryahan Mathieu Debuchy ayaa waqtigii dheeriga ahaa ee lagu daray qeybtii hore ee ciyaarta ayaa gool madax ah oo barbardhac ah u dhaliyay kooxda Arsenal,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Olivier Giroud ayaa daqiiqadii 64-aad ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Arsenal.
Ciyaaryahan Fabio Borini oo bedel ku soo galay ciyaarta ayaa dhamaadkii ciyaarta kaarka casaanka ah ka qaatay kooxda Liverpool.
Ciyaaryahan Martin Skrtel ayaa waqtigii dheeriga ahaa ee lagu daray ciyaarta goolka labaad ee barbardhaca u dhaliyay kooxda Liverpool.
Kooxda Arsenal ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta lixaad,waxana ay leedahay 27-dhibcood,halka kooxda Liverpool ay horyaalka uga jirto kaalinta tobanaad,iyadoo leh 22-dhibcood.